Wadahadal muddo dheer u socday Ingriiska iyo Midowga Yurub ayaa heshiis laga gaaray… – Hagaag.com
Wadahadal muddo dheer u socday Ingriiska iyo Midowga Yurub ayaa heshiis laga gaaray…
Posted on 24 Diseembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Heshiis ganacsi ayay wada gaareen Ingiriiska iyo Midowga Yurub maanta oo Khamiis ah oo ku saabsan marxaladda Brexit-ka ka dib, dowladda Ingiriiska waxay tixgelisay in heshiiska uu fulinayo dhammaan ballamihii ay u qaaday dadkeeda, dhinaca Yurubna wuxuu u arkaayay heshiiska mid cadaalad ah oo dheellitiran.
Ra’iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa wuxuu shirkiisa jaraa’id ku yiri, “Waxaan dib ula soo noqonay gacan ku haynta aayaheena, sharciyadeena iyo madaxbanaanideena kadib heshiiska aan la galnay Midowga Yurub. Waxaan dib ula soo laaban doonnaa si buuxda gacan ku haynta biyaheena.”
Wuxuu intaas ku daray in dalkiisu awood u yeelan doono inuu kiciyo shaqooyinka, uu taageero beeralayda isla markaana uu soo saaro cunno “Markii ugu horreysay waxaan noqon doonnaa dal madax-bannaan,” ayuu raaciyay.
Johnson wuxuu tixgeliyey in “heshiisku u wanaagsan yahay Yurub oo dhan iyo saaxiibbadeenna iyo shurakadeena,” ayuu raaciyay, “Waxaan u sheegayaa reer Yurub: Waxaan sii ahaan doonnaa saaxiibbadiinna oo waan idin taageeri doonnaa.”
Wuxuu sheegay in dalkiisu doonayo inuu noqdo xoog iskaashi la leh dhinaca kale oo dhinacayo walba leh.
Ra’iisul wasaaraha Britain wuxuu cadeeyay in laga bilaabo 1-da Janaayo ee soo socota ay jiri doonto nidaam cusub oo canshuuraha ah.
Johnson wuxuu balan qaaday in sanadka cusub uu la imaan doono xasilooni cusub, iyadoo laga adkaaday aafada Corona iyo dib u dhiska dhaqaalaha, isagoo tixgelinaya in heshiiska Midowga Yurub uu macnihiisu yahay xasilloonida booliska, waaxda duulista iyo shirkadaha.